Barlamaanka Puntland oo Xubinnimadii kala noqday Dhoobo- Daareed – Kalfadhi
Baarlamaanka Puntland ayaa maanta xasaanaddii Xildhibaannimo ka qaaday Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland C/xakiin Dhoobo Daareed, kaddib markii laga keenay mooshin xasaanad ka qaadis ah oo ku aadan inuu ku xadgudbay dastuurka iyo jiritaanka Puntland.
Mudanayaasha golaha wakiillada dowladd goboleedka Puntland ayaa maanta cod kalsooni kala noqosho ah u qaaday Cabdixakim Maxamed Axmed Dhoobo.
Fadhiga golaha oo ay soo xaadireen 41 mudane ayaa 40 ka mid ah waxaa ay u gacan taageen in xasaanaddii xildhibaannimo iyo xubinnimadii lalaga noqday.
November 7, 2019 ayey aheyd markii laga qaaday xilka afhayeenka golaha wakiilada Puntland, maanta waxaa laga qaaday xubinnimadii.
C/xakiin Dhoobo Daareed, ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka dibadiisa, waxaana la oggeyn xiliga uu kusoo noqon doono magaalada Garowe.
Horay ayuu u diiday xil ka qaadista lagu sameeyay, waxaana uu aaminsanaa in aysan sharci aheyn.